Amakhodi wamahhala we-Xbox Live (2020 Verified) - Awekho i-Generator & Survey - Ukudlala
Kulezi zinsuku, ngokwanda kwesidingo semidlalo, abantu baqhubekela phambili kakhulu emidlalweni etholakala ngokwedijithali kunama-disks aphathekayo. Enye yezinzuzo ezinhle kakhulu zokuthenga imidlalo yedijithali ukuthi abavukuzi bedatha bayakwazi ukuqhekeza amakhodi avula imidlalo esitolo mahhala.
Amawebhusayithi amaningi athi ayakwazi ukukhiqiza amakhodi wamahhala we-Xbox. Ngakho-ke, kulokhu okuthunyelwe, sizodlula kulezi zimangalo futhi sithole iqiniso nge-Free Xbox Live Codes Generator.
Ngabe i-Free Xbox Live Codes Generator iyasebenza ngempela?
Abantu abaningi bayangabaza ngokusebenzisa i-Xbox code generator kepha ungakhathazeki. Kulesi sigaba, sizobe sidingida zonke izici zokulwa nokuphikisana nama-Xbox code generator.
Ungawathola kanjani amakhodi wamahhala wePSN?
Thola i-PUBG UC yamahhala - Izindlela Zokusebenza
Amakhodi anikezwa ngabantu abazimisele ukukunika noma bakhiqize besebenzisa i-code code. Isoftware izosebenzisa izimvume nezinhlanganisela ukukhiqiza ikhodi ezobukeka ingeyangempela, kepha ingahle isebenze noma ingasebenzi. Kufana nokudlala i-lucky draw lapho ungawuthola khona noma ungawutholi umklomelo. Kunokwehla okuningi ongafuna ukukucabangela ngaphambi kokusebenzisa i-generator code.
Kuthatha isikhathi:Abavukuzi bamakhodi ababeke isikhathi salezi khodi bangabukeka bengokoqobo kepha kugcine kungamanga. Kuzofanele uthathe umzamo wokufaka wonke amakhodi akhiqizwa isayithi kuze kube yilapho eyodwa ikusebenzela.
Ukuvinjelwa:I-akhawunti yakho ingahle imiswe okwesikhashana ngokwenza lezi zinhlobo zemisebenzi njengoba kungekho emthethweni ukuqhekeza amakhodi noma ukuthola imidlalo 'yamahhala'. Nasi isithombe-skrini esivela ku-Xbox Live esisekela isimangalo sethu.
Uikuchitha iskhathi:Asikho isiqinisekiso samakhodi akhiqizwayo ngoba ngokusesha okukodwa ku-google uzothola izinkulungwane zamasayithi ezithi zikunikeze amakhodi wamahhala kepha uzophela ngokuwafaka ungazitholi ndawo kepha udlala ngesikhathi sakho owawungasisebenzisa gcwalisa lelo zinga emdlalweni.
Usongo Lwangasese:Amawebhusayithi amaningi azokucela ukuthi ubhalise usebenzisa ikheli lakho le-imeyili bese unemininingwane yakho eyimfihlo, kungcono ukuthi ungangeni ngemvume noma usebenzise ikheli le-imeyili eliyiduma lamasayithi afana nalawa. Ungasebenzisa nesandiso esihle ukuhlunga lezi zinhlobo zezicelo zokungathembeki.
Engxenyeni elandelayo yalokhu okuthunyelwe, sizohamba ngezindlela ongathola ngazo amakhodi asemthethweni futhi athembekile.
Amakhodi E-Xbox Emahhala - Indlela esemthethweni
Masifike ezingeni obukade ulilindele ukuthi uwathola kanjani amakhodi wamahhala?
Ungabamba iqhaza ekunikezelweni okwenziwe yi-YouTubers, njengoThatDudeSly, Reck Alice, nabanye abaningi. Noma lolu uhlobo lokudweba ngenhlanhla, kepha unethuba elingcono lokuwina lapha kunokuhlala lapho uzame amakhodi wamahhala kusuka kuwebhusayithi engekho emthethweni.
2. Kuthengiswa ezitolo
Kulezi zinsuku imidlalo eminingi iba mahhala ezinyangeni ezimbalwa, njenge-Fortnite, izinganekwane ze-Apex, i-Call of Duty Warzone, njll. Kodwa-ke, imidlalo ebiza imali nayo ikhululwa ngabathuthukisi isikhathi esifushane. Ngakho-ke, kufanele uqaphele lapho ukuthengisa kuqala.
Kunama-subreddits amaningi anika amakhodi wamahhala. Ungawajoyina futhi uwasebenzisele intando yakho. Ebhokisini lokusesha le-Reddit search 'r / freexboxcodes' futhi kufanele uthole imiphumela, lapho omengameli bezokusiza ukuphuma.
4. Ukudlula kwegeyimu ye-XBOX
Kunesizathu sokuthi kungani sishilo le nketho ekugcineni. Akuyona mahhala ngokwezobuchwepheshe, kodwa nakanjani kuyindlela ongayicabangela, iMicrosoft njengenkampani ikunikeza ngamamodeli amathathu okubhalisela lapho ungakhetha khona ukungena kwephasi noma umdlalo wokugcina, kuye ngezidingo zakho ongakhetha kuzo eyodwa.
IGame Pass Ultimate iqala ku- $ 14.99 / ngenyanga bese kuthi iGame Pass iye ku- $ 9.99 / ngenyanga uzothola amakhulu emidlalo mahhala; yingakho ungathola imali yakho ngokufaka okunye esikhundleni semidlalo eminingi.
Futhi bazokunikeza ukufinyelela kwamahhala kwe-beta kungxenyekazi yabo yokudlala yamafu. Uthola nezaphulelo ezikhethekile ezihlokweni ze-AAA. Ngokuzenzakalelayo, uzothola imidlalo efana neTom Clancy's Rainbow Six Siege, Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Forza Motorsport 7.
Izinyathelo zokufaka ikhodi ku-Xbox Live Store:
Njengekhodi yendabuko yedijithali, uzofaka ikhodi esitolo se-Xbox bukhoma; noma kunjalo, ukuvuselelwa, izinyathelo zimi kanje:
Ngena ngemvume nge-akhawunti ye-Microsoft.
Iya kusitolo esisemthethweni seMicrosoft.
Bese ukhetha inketho yokusebenzisa ikhodi.
Faka ikhodi yezinhlamvu ezingama-25 esikhaleni esidingekayo bese ushaya u-enter.
Qaphela: Kodwa-ke, uma ukhetha ukusebenzisa i-code code, isinyathelo sokuqala kungaba ukukhiqiza amakhodi kuwebhusayithi ye-code generator.
Ukuphetha, amathuba okuthi i-generator code isebenze mancane kakhulu. Ngakho-ke kufanele ukhethe izindlela ezikuqinisekisa ngemidlalo yamahhala, okungaba ngokubamba iqhaza ekunikezeni noma ukuthenga iphasethi yomdlalo we-Xbox, ngokombono wethu, futhi kuyindlela engcono kakhulu kuwe.
Siyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kuwuphendulile umbuzo wakho, futhi sethemba ukuthi nawe usitholile isisombululo. Uma kukhona ukusikisela noma izindlela ongathola ngazo ikhodi yamahhala ye-Xbox yamahhala, bese wabelana ngayo nathi ebhokisini lokuphawula elingezansi.
amasayithi wokusakaza bukhoma aphezulu
amawebhusayithi ukubuka ibhola ebukhoma
amasayithi wamahhala wokulanda ama-movie abukho ubulungu
Ikhodi yephutha le-disney plus isikhungo sosizo 83
amakhodi wamahhala we-xbox 1
izingosi zokusakaza zomculo zamahhala azivinjelwe